Zvinogumbura here kushandisa wiricheya sechikamu chejasi? Kunze kwekunge iwe uri kunyatsoda a kufamba mudziyo, saka hongu. Iine Halloween padhuze nekona, vanhu parizvino vari kuuya ne kana vakatogadzirira yavo koshitomu. Ipo paine zvakawanda zvekusagumbura zvokupfeka, kune vashoma vanhu vanozove vari mune yakaderera pane chipfeko chakakodzera gore rino. Mutemo wakanaka wechigunwe ndechekuti unogara uri zano rakanaka rekusiya tsika dzevanhu uye mapoka akasarudzika ehembe dzeHalloween.
Nei iri zano rakanaka kudzivirira zvokupfeka inosanganisira wiricheya kunyanya? Kana iwe usina kudiwa kwe kufamba mudziyo uye zviri nyore kushandisa iyo nekuda kwevaraidzo, unogona kushatisa chiitiko chemumwe munhu se wiricheya mushandisi. Haisi chimwe chinhu chavanogona kutora uye kubvisa. Vanoshandisa wiricheya vanogara vachibata neicho chaicho zuva nezuva zuva rega rega vane zvavo zvakasarudzika zviitiko. Kuva nehanya kune vamwe panguva yeHalloween kungaite sekusina basa, asi izvo yakakosha kuve nechokwadi chekuti zuva rinonakidza kune vese.
MuHollywood, pane akawanda makuru mavara mukati mavhiripu. Asi, kazhinji nguva dzose vanoratidzwa nevatambi vane simba. Izvi zvinogona kutungamira vamwe kuti vatende kuti kuzviita kwezuva rimwe chete kwakanaka. Nepo zvikamu izvi zvinogona kuunza kuchiedza remara vanhu vamwe nevamwe, izvo hazviite kuti zvive zvakakodzera kune zvinhu zvehembe yeHalloween.
vamwe wiricheya vashandisi havagumbure mumwe munhu kushandisa wiricheya sechikamu chavo koshitomu. Vangave vane hanya nazvo kushandisa a wiricheya as chipfeko nekuti vamwe vanogona kusaziva kushandisa chigaro nemazvo, uye kumhanyisa njodzi yekuzvikuvadza kana vamwe. Zvisinei, vanogona kunzwa vakagumbuka kana vanhu vanga vachiseka nemaune remara vanhu. Zvakanakisa kudzivirira mamiriro aya zvachose uye sarudza chipfeko izvo hazvireve kufamba Device.
Kuteedzera vanhu vakaremara haimbove zano rakanaka kana iwe usina, kunyangwe kana uchiitwa pasina kuseka. Ndapota usabhadhare wiricheya kubva kuchipatara kana kukumbira shamwari yako kukwereta yavo, nekuti unogona kunge uchizvidza vamwe.